३ करोड नेपाली हरुको सपोर्ट तपाईलाइ सलुट छ !! हेरौ भिडियो !!! रबि लामिछानेलाई नराम्रो भन्ने दिल निशानी माथि नेपाली चेलीको अहिले सम्मकै कडा जबाफ भिडियो - Enepalese.com
३ करोड नेपाली हरुको सपोर्ट तपाईलाइ सलुट छ !! हेरौ भिडियो !!! रबि लामिछानेलाई नराम्रो भन्ने दिल निशानी माथि नेपाली चेलीको अहिले सम्मकै कडा जबाफ भिडियो
इनेप्लिज २०७४ मंसिर २१ गते ११:३२ मा प्रकाशित